MundoGEO Umagazini ngoku kwiipilisi - ii-Geofumadas
MundoGEO Umagazini ngoku kwiipilisi
Meyi, 2012 Apple - Mac, Geospatial - GIS
MundoGEO, nkampani omele ngakumbi intsimi geospatial kule ndawo yonxibelelwano Latin American iye yamisela izicelo ezimbini lowu MundoGEO zingajongwa weselula, bobabini Apple iOS and Android.
Kuphela kulo nyaka, eli phephancwadi wadibanisa okubhalwe kwi-InfoGEO kunye ne-InfoGNSSIinguqulelo Olunye IsiNgesi, isiPhuthukezi Spanish kunye ibifakiwe. Kwaye nangona kusenokuba Calameo, akuba wakhonza kunye nobugcisa Flash umxholo kumthwalo mobile bakwazi ukufikelela kuyo. Ngoku, ngokusetyenziswa kwe-HTML5, umba uphendululwa kwaye amaphephancwadi ahambelana nomnxeba nge-multimedia ukucebisa kunye nokuzinyameka kwamanyathelo kuya kuqiniswa apho kufuneka kwenziwe umsebenzi othile ngenxa yokuba iintolo kunye neziqulatho ezifakiwe zihlala zingabonakali.
Njengomhlobo wethu, u-Eduardo Freitas, uthi:
Ukumiselwa kweli phephancwadi ifomati tablet linyathelo ngaphaya iphephancwadi MundoGEO ukuya ukudibanisa iindlela ezininzi ukufumana geomatics ezidityanisiweyo ekuhlaleni.
Nocingo ungayikhetha, ngoku lenze enye indlela yokuba abantu bafunde baze kuhlaziywa izisombululo kunye nobuchwephesha geospatial, kodwa kungengayo intsebenziswano ngakumbi.
Isicelo ungakhangela iTunes, kulabo abasebenzisa iPadesi okanye Isitolo se-Android. Emva kokuba isicelo sifakwe ungabona uxwebhu lokuqala olubekwe kule fomethi. Ekugqibeleni siza kubona ezinye zangaphambili kwaye nangona isicelo sisandul 'ukuqiniseka kwindlela yokulayisha kunye nenkxaso kwiinguqulelo ezintsha.
Kwaye ngubani ofuna ukukubona kwi-PC, inokwenzeka kwakhona http://mundogeo.com/mundogeo67/Apho inguqulo apho yi inqaku kwilahleko kwaye iluncedo kakhulu uEzra Lima, bethetha GPSPrune, omnye kwabambalwa phambili iinkqubo Java ezivumela data GPS evela Linux olusebenzayo eboniswe.
Kwakhona kugxininisa ingqalelo kwi-IDE yimixholo, ngoku iya kuba yicandelo elingapheli phantsi kwegama le-IDE # Xhuma.
Ngethuba lethu, siyakwamkela, ngelixa uqonda ingqalelo ukuba iinkampani ezinjengalezi zizisa ukugcinwa kwecandelo.
Landa i sicelo iTunes.
Landa i sicelo Isitolo se-Android.
Post edlulileyo«Edlulileyo Hlala u phefumlelwe! Ileta kubasebenzi bam
Post Next Award abaphumeleleyo MundoGEO # Connect 2012Okulandelayo "